Asomafo 20 NA-TWI;NIV - Paulo fi Efeso - Basabasayɛ yi akyi - Bible Gateway
Asomafo 19Asomafo 21
Asomafo 20 Nkwa Asem (NA-TWI)
20 Basabasayɛ yi akyi no, Paulo frɛɛ asuafo no kaa nsɛm de hyɛɛ wɔn nkuran, kraa wɔn fii hɔ kɔɔ Makedonia. 2 Okyinkyin saa amantam no mu tuu asuafo no fo de hyɛɛ wɔn nkuran. Afei, obeduu Hela. Odii hɔ abosom abiɛsa. 3 Bere a ɔresiesie ne ho akɔ Siria no, ɔtee sɛ Yudafo no abɔ ne ho pɔw; enti ɔsan n’akyi kɔfaa Makedonia kɔe.